Gada (mpaminany) - Wikipedia
I Gada dia mpaminanin'i Israely resahina ao amin'ny Baiboly. Sahala amin'i Natàna dia mpaminany nanolo-tsaina an'i Davida i Gada, sady lazain'ny lovantsofina jiosy fa nanandray anjara niaraka amin'i Samoela tamin'ny fanoratana ireo Bokin'i Samoela.
I Gada ao amin'ny Bokin'i SamoelaHanova
Hita ao amin'ny Boky voalohan'i Samoela (1Sam. 22.5) ny firesahana voalohany an'i Gada, tamin'ny nitenenany an'i Davida hiverina any amin'ny tanin'i Jodà.
Ao amin'ny Boky faharoan'i Samoela (2Sam. 24.11 -- 24.13) no iresahana indrindra ny mpaminany Gada: taorian'ny niaiken'i Davida ny fahotany noho ny nanisany ny mponin'i Israely sy ny an'i Jodà dia nalefan'Andriamanitra tany amin'i Davida i Gada mba haneho azy endri-panasaziana telo. Resahina indray i Gada ao amin'ny 2Sam. 24.18, tamin'ny nitenenan'i Davida ny hanamboatra alitara (na ôtely) hisaorana an'Andriamanitra noho ny nampitsaharan'Andriamanitra ny pesta izay nosafidiny tamin'ireo loza telo. Ny toerana notondroin'i Gada hananganana ny alitara dia "ao amin'ny famoloan'i Araona Jebosita".
I Gada ao amin'ny Bokin'ny TantaraHanova
Ny Boky voalohan'ny Tantara (1Tant. 21.18) dia miresaka ny fihaonan'i Gada tamin'ny anjelin'Andriamanitra izay nanoro azy ilay toerana hanorenana ny alitara. Voalaza ao amin'io Boky voalohan'ny Tantara io koa (1Tant. 29.29-30) fa nanoratra boky momba ny tantatran'i Davida i Gada mpahita niaraka amin'ny boky nosoratan'i Samoela sy ny boky nosoratan'i Natàna.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Gada_(mpaminany)&oldid=975820"
Dernière modification le 20 Oktobra 2019, à 15:03
Voaova farany tamin'ny 20 Oktobra 2019 amin'ny 15:03 ity pejy ity.